चेम्बर आन्दोलन चर्काऔं | गृहपृष्ठ
Home तीतो मीठो चेम्बर आन्दोलन चर्काऔं
on: January 26, 2018 तीतो मीठो
यति धेरै प्राकृतिक स्रोत हुँदाहुँदै पनि नेपालको आर्थिक विकास हुन सकेन । विकास गर्न के गर्नुपर्ला भनेर धेरैले प्रश्न गर्छन् । उत्तर कतैबाट आउन सकेको छैन । तर, त्यसकोे उत्तर भने सजिलो छ । त्यो हो, आर्थिक विकास गर्न चेम्बर आन्दोलन गर्नुपर्छ । पहिले त आर्थिक विकासको पालो आएकै थिएन नि । बल्ल त राजनीतिक क्रान्ति सिद्धियो । अब पालो आर्थिक क्रान्तिको हो । चेम्बर आन्दोलन चरम भएपछि आर्थिक क्रान्ति पनि सम्पन्न हुन्छ । अनि आर्थिक विकास पनि स्वतः भइहाल्छ ।
तर, चेम्बर आन्दोलन शुरू गर्न आर्थिक क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्गठन, यसका नेता तथा कार्यकर्ताहरु पनि पर्याप्त चाहिन्छन् क्या । त्यसपछि व्यावसायिक आन्दोलन, विद्रोह आफै शुरू हुन्छ । चेम्बरहरुबीच घम्साघम्सी प्रतियोगिता हुनुपर्छ, मान्छे तानातान र हानाहान हुनुपर्छ । अनि हुन्छ आर्थिक क्रान्ति । नत्र त्यसै हुन्छ ?
भलै त्यसको शुरूवात भने धेरै पहिले नै भइसकेको छ । उहिले वणिक मण्डलबाट शुरु भएको यो आन्दोलन विसं २०२२ सालदेखि नेउवा सङ्घमा पुग्यो । त्यो पछि नेउवा महासङ्घ पनि भयो । २०५२ सालमा चुनाव हारेको झोकमा विनोद चौधरीले २०५९ मा नेपाल उद्योग परिसङ्घ खोलेर चेम्बर आन्दोलनमा इँटा थपे । यो कदमले चौधरीले व्यावसायिक एकतामा विष घोले भन्नेहरु पनि छन् । चौधरीका भनाइमा त्यो समयको माग थियो । कतिले परिसङ्घ खुल्नुलाई केवल जुँगाको लडाइँ ठाने । तर, दुवैले जुँगा नै पाल्ने गरेका छैनन् । त्यसैले यसलाई जुँगाको लडाइँ मान्नै मिलेन । यो प्रतिष्ठाकोे लडाइँ पनि थिएन होला । किनकि दुवै प्रतिष्ठित उद्योगपति जो परे । जेहोस् अरूले जेजे भने पनि नेपालको इतिहासमा यो एक चेम्बर आन्दोलनको अग्रगामी कदम नै थियो भन्ने मान्नुपर्छ ।
यहाँसम्म आइपुग्दा चेम्बर आन्दोलन गर्न पुग्ने गरी देशमा पर्याप्त आर्थिक सङ्घसंस्था पनि खुलिसकेका छन् । जस्तै, विसं २००९ सालदेखि नेपाल चेम्बर छँदै थियो । उसैको पहलमा पछि सङ्घ खुल्यो । त्यसपछि महासङ्घ र परिसङ्घ पनि खुल्यो । महासङ्घले देशभरि १०५ हाँगाबिगा फैलाइसकेको छ । परिसङ्घ पनि सातै प्रदेशमा सञ्जाल बिछ्याउने चरणमा छ । त्यस्तै, ज्योतिले पनि पछि २०६३ मा चेम्बर र महासङ्घका पूर्वअध्यक्षहरुलाई साथमा लिएर नेपाल व्यावसायिक पहल (एनबीआई) भन्ने संस्था खोले । भलै यो व्यावसायिक सङ्गठन नभए पनि व्यवसायीहरुबीच चेम्बर आन्दोलन गर्न सघाउने एउटा संस्था बनिसकेको छ ।
यता, उद्योग व्यापार भए पनि नभए पनि विभिन्न देशका नाममा दर्जनौं द्विराष्ट्रिय चेम्बरहरु खुलिसकेकै छन् । प्रत्येक महीनाजसो कुनै न कुनै देशका नाममा एउटा न एउटा चेम्बर खुल्ने क्रम अझै जारी छ । अब नेपाल चेम्बरको पनि पखेटा पलाएको छ । उसले पनि प्रादेशिक हिसाबले सङ्गठन विस्तार गर्दै छ । यी सबैखाले व्यावसायिक चेम्बरहरुमा व्यावसायिक आन्दोलनलाई मलजल गर्न राजनीतिक दलका सङ्गठनहरुले छाया सरकार भनेजस्तै भूमिगत रूपमा काम गरिरहेकै छन् ।
त्यतिमात्र कहाँ हो र ? एकताका नेउवा महासङ्घका केही पूर्वअध्यक्षको अगुवाइमा पूर्वअध्यक्षहरुको सङ्गठन खुलेको थियो । त्यसमा उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमात्र नभै सबै क्षेत्रका पूर्वअध्यक्षहरुको सदस्यता रहेको थियो । अहिले त्यसले शायद भूमिगत भएर काम गरिरहेको होला । अस्ति भर्खर नेउवा महासङ्घका पूर्व अध्यक्षहरुको एकाएक सक्रियता देखियो – सरकारलाई के के हो सल्लाह दिने भनेर । त्यो भेलाले सङ्गठनको आकार ग्रहण गर्‍यो कि त्यो अझै गर्भमै छ भन्ने यो पङ्क्तिकारलाई थाहा भएन । तर, यस्ता गतिविधिहरुले चेम्बर आन्दोलनका लागि चाहिने ‘क्रिटिकल मास’ करीब करीब पुगिसकेको स्थिति छ । अब नवधनाढ्य नेताहरु जो पछिल्लो चुनावमा हारेपछि बेरोजगार बनेका छन्, उनीहरुको सक्रियतामा पनि नेउवा महासङ्घ, परिसङ्घजस्तै देउवा सङ्घ, पौडेल महासङ्घ, गौतम चेम्बर आदि खुल्दै जालान् भन्ने आशा गरौं । तिनले पनि आगोमा घ्यू थप्लान् नै ।
जे होस् चेम्बर आन्दोलनले गति छाडेको छैन । बरु अहिले यो विस्तारकै क्रममा छ । पहिले महासङ्घ र पछि परिसङ्घभित्रै विद्रोह गरेर खेतान र एक थरी अग्रवालहरु त्यहाँबाट बाहिरिएका थिए । अहिले फेरि केडिया र अर्को थरी अग्रवालहरुलाई पनि परिसङ्घ साँघुरो लागेर चेम्बरमा फराकिलो ठाउँ देखेर उतै लागेका छन् । त्यस्तै, अहिले महासङ्घका भिपीरूपी भूपू पिलरहरु प्रमोद र भाष्कर पनि चेम्बरमा रातो कार्पेटमा स्वागत पाउनेमा परेका छन् । अब चेम्बरको ढोका यी नवप्रवेशीहरुका लागि फराकिलो हुन्छ वा साँघुरो, त्यो समयले पछि बताउँदै जाला । त्यस्तै, दोस्रो पटक चेम्बरका अध्यक्ष बनेका अग्ला राजेशका अगाडि नवप्रवेशीहरु अग्लो देखिनेछन् वा होचो, त्यो पनि समयले नै बताउला । अहिलेलाई यत्ति भन्न सकिन्छ कि नेपालमा चेम्बर आन्दोलनले बल्ल स्वरूप ग्रहण गर्न थालेको छ । अब भने नेपालमा चेम्बर आन्दोलन सफल भएर आर्थिक क्रान्ति हुन्छ जस्तो छ ।
केही दिनयता समानान्तर साङ्गठनिक संरचना बनाएको खुशियालीमा नेउवा महासङ्घले चेम्बरलाई ‘लभ लेटर’ लेखेको विषयले व्यावसायिक बजार तातेको छ । कत्तिले यसलाई महासङ्घको ठालूपन र चेम्बरको चालूपन पनि ठानेका छन् । तर, वास्तवमा यो चालू र ठालू कुराभन्दा पनि यो एक चेम्बर आन्दोलन नै हो भन्ने यो पङ्क्तिकारको बुझाइ रहेको छ । यस्ता आन्दोलनहरुबाटै देशले गति लिन्छ, आर्थिक प्रगति दिन्छ । त्यसैले यस्ता व्यावसायिक आन्दोलनहरु भई नै रहनु पर्छ । यो खुशीको कुरा हो कि चेम्बर आन्दोलनको शुरूआत राम्रैसँग हुन लागेका लक्षण देखापर्न थालेका छन् । त्यसैले चेम्बरभित्र हुलका हुल छिर्नुहुने हेभीवेट उद्योगी, व्यवसायी मित्रहरुलाई शुभकामना । तपैंहरुको यो सक्रियताले चेम्बर आन्दोलनले थप गति लेओस्, यही नै छ मेरो कामना ।
raj kumar dotel
Urgent : for Nepal and nepali should been election of nepali presedent !
Absolutely needed right now…….
LeaveaReply to Tara Bhattarai Cancel Reply